トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Normal bhizimisi panguva pachikuva kusarudza munhu nepachinko yokumusoro
Tsvaka kuti nechokwadi kusiya kuchikuva ndiko Inyaya hazviiti asi, kuti kudzivirira pfachura Investments, mashoko uye zvipikiri ndiyo nzvimbo uchida kuona. In, ari tafura kusarudza panguva dzose mabhizimisi, tichakurukura kuti zvakanaka I sarudza kuchikuva nehanya chikamu. Chokutanga, ticharamba kutarira mashoko.
Izvi, Zvichienderana nguva kushanyira, kana kuona data, unofanira kufunga kufungisisa chokwadi kuti zvinoitika mabhizimisi zuva. In inowanzotorwa mabhizimisi zuva, nekuti hakuna kuenda kutumbura nepachinko yokumusoro divi, nokuti yakanga yakasimba zuva risati, zviri nani kuti akamira pakuva pakarepo akagara pasi.
ari tafura dziri yapfuura zuva, kana muri kangani uye worudzii divi raparadza ose Atari uye uwandu nokumukirana zuva rinokosha. Uye Auya zuva pamberi, uyewo wakanaka nhamba nokumukirana vamire zuva, pane mukana kuti zuva uye ezvipikiri hachina kuchinja. Uyezve, kunyange kana pasina akasungirirwa Inochikugi, chipikiri kupfuura bhora kusvikira pakutanga induction zvipikiri, ungave akasungirirwa.
zvino date rambi, panewo mufananidzo rotational kumhanya kuti varove rwunoratidzwa. Kusvikira rimwe guru raparadza, Ramba zvakare nechokwadi kuti papi kutenderera. A Mazuva mashoma rakasimba, rakanaka nhamba rotations zuva, uye kana raparadza iri kuyerera anomiswa uye kwete zita zvichida, ndiko kuti pane ukoshi kuti varove panguva dzose bhizimisi. Kana
Horukon kuenda CR muchina zvainanga vangadai vava chitoro, kuverenga akadai tsika, dzakadai nefungu boka configuration uye ROM pakati Horukon, nokusanangura zvichida kupinda simba-upenyu kumira zvino. Kana
vanhu vanoda kuramba kuhwina muna Hanemono, nekuti ezvipikiri kugadziridzwa rakakamurwa zvaitika, zvichaita kuonekwa pakati chipikiri.
Zvisinei, kunyange kana ari mashoko kune simba, kana uchiisa kana kwete sungisa mbambo, nekusunga kuti induction chipikiri hauna rakurudzira kuti zvikuru inivhesitimendi. Izvozvo, sezvo payout zvinoderedza kunyange mhanyisa, uye kana anorova, Zvinokurudzirwa kuti kutsiva yakanaka uye zvinhu vakatongoparadzwa.
Uyezve, kunyange kana paine raparadza kunyange pazuva, tsime zvikuru vachishandisa kutenderera nokukurumidza Kana kwete, panyaya iri rotational nokukurumidza ingave pasi kunzwa ndechokuti, ndinofunga zviri nani kufamba pakarepo kufa. Uyezve, chipikiri kuchinja panguva dzose mabhizimisi kwava dzose mbambo chitoro chake. Kana
kurangarira mamiriro mbambo, nokuti mbambo wehurumende panguva yaakazosunungurwa kana pakupora rinova unreadable, Rambai Nyatsotarisa. Chipikiri kuipa ndechokuti, asi ari millimeters shoma nokuda yokutendeutsa reshiyo, anobuda mutsauko. Kuona chipikiri iwe nyore kusiyanisa kuchikuva yeWekumusoro chinangwa meso, asi munhu anoda zvaisanyatsotisiyanisa nyore, ticharamba ichatsanangura panguva rotational nokukurumidza. Kana mashoko ari
nhamba nokumukirana, ari nepachinko yokumusoro pakati 3.5 Yen Exchange, vanenge 13 munguva chiuru Yen, vanenge 15 nguva muna 3 Yen Exchange, vanenge 17 nguva 2.5 Yen Exchange, uye nguva vanenge 20 muna 2.3 Yen Exchange zvino ane. Vamwe kusiyana muenzaniso uye zvingaita Chokwadi, asi ichi ndicho kuwanda rotations por avhareji zviuru Yen Kana uine hwandaiva chipikiri kuchinja. Saka zvikuru kana rikasaita ungafunga, asi ichi ndicho chokwadi.
ari kwagara mubhizimisi, chokwadi kuti kuvhura mbambo, nekuti anenge asina, edza kusarudza pachikuva anochinja risingamboshandisi yakaenzana mari mwero nenhamba nokumukirana. Zvisinei, hazvina kukwana akarova Yen zviuru. Sezvo iwe uchava gogonera mu aibuda bhora, kubudikidza kudyara dzinenge zviuru zvinoverengeka Yen, tinogona kutaura musoro kuona nokuda pakuverenga avhareji nhamba nokumukirana. 3 Yen Exchange razova nguva anenge 20. Vamwe kusiyana muenzaniso uye zvingaita Chokwadi, asi ichi ndicho kuwanda rotations por avhareji zviuru Yen Kana uine hwandaiva chipikiri kuchinja. Saka zvikuru kana rikasaita ungafunga, asi ichi ndicho chokwadi.
ari kwagara mubhizimisi, chokwadi kuti kuvhura mbambo, nekuti anenge asina, edza kusarudza pachikuva anochinja risingamboshandisi yakaenzana mari mwero nenhamba nokumukirana. Zvisinei, hazvina kukwana akarova Yen zviuru. Sezvo iwe uchava gogonera mu aibuda bhora, kubudikidza kudyara dzinenge zviuru zvinoverengeka Yen, tinogona kutaura musoro kuona nokuda pakuverenga avhareji nhamba nokumukirana.